Maxay tahay sababta uu xiriirka UEFA ku doortay inay Magaalada Istanbul ka baddelaan final-ka Champions League? – Gool FM
Maxay tahay sababta uu xiriirka UEFA ku doortay inay Magaalada Istanbul ka baddelaan final-ka Champions League?
(Yurub) 17 Juun 2020. Waxaa wali la is-weydiinayaa sababta uu xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA kaga beddelay marti-galinta final-ka tartanka Champions League xilli ciyaareedkan 2019-20 Magaalada Istanbul, kaddib markii magaalada Lisbon ee dalka Portugal loo doortay marti galinta final-ka tartankan.
Waxaa lagu soo warramayaa in UEFA ay u dooratay Portugal halka ay ku taallo Juquraafi ahaan iyo inaysan koox tartanka ciyaareysa ka dhisnayn Waddankaasi.
Lisbon ayaa sidoo kale lagu doortay inay tahay magaalo soo jiidasho badan qurux ahaan, iyadoo ay intaas u sii dheer tahay inay ku yaallaan labo garoon oo ay u dhammeystiran yihiin adeegyada looga baahan garoon lagu marti galin karo final-ka tartanka horyaallada Yurub, waxayna kala yihiin garoonka kooxda Benfica ee Estadio da Luz iyo Estadio Jose Alvalade oo ay ku ciyaarto kooxda Sporting Lisbon.
Waxaa intaas dheer, inta ugu badan xaddidaadda Coronavirus ee dalka Portugal la qaadi doono bishan, iyadoo wixii ka dambeeya 22-ka bisha June la fasixi doono duullimaadyada hawada.
Maamulka tartanka horyaallada Yurub ayaa sii wadi doona inaysan taageere soo galin garoommada lagu ciyaarayo doono tartanka, inkastoo shaqsiyaad gaar ah loo ogolaan karo.
Si kastaba ha ahaatee, UEFA ayaa la fahansan yahay inay albaabada u furi karto haddii ay dowladda Portugal wax ka baddesho xaaladda caafimaad.
Haddii ay xeerarka dowladda ay isbaddelaan xilliga la isku duwayo tikidhada, waxaa jirta fursado ay taageerayaal kooban ku daawan karaan ciyaaraha.
Xaddiga taageerayaasha soo xaadiri kara garoommada ayaa si weyn loo dhimi doonaa si loo ilaaliyo bad-qabka bulshada iyo dhaqan galinta xeerka kala fogaanshaha.
UEFA ayaa ku dhiirratay inay lumiso dakhli ka soo gali lahaa baahiyeyaasha ciyaaraha, kuwaasoo filaya in dib loogu celiyo lacagahooda, maadaama ay lix kulan ka yar tahay kulammadii la jadwaleeyay bilawgii xilli ciyaareedkan.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Napoli iyo Juventus ee finalka Coppa Italia oo la shaaciyay